Nezvedu - Blch Pneumatic Science & Technology Co, Ltd.
BLCH Pneumatic Science uye Technology Co Ltd yakavambwa muna Nyamavhuvhu 2004, iri munzvimbo yeYUEQING yekusimudzira hupfumi maindasitiri. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye24000 ㎡, iine 5 zvigadzirwa zvekugadzira zvine vashandi vanopfuura mazana matatu. Iyo isiri-yedunhu bhizinesi rinoshanda muR&D, kugadzirwa, kutengesa uye kugadziridzwa kwebasa kwepneumatic zvinoriumba.
Isu ikozvino tinopa mashanu akateedzana pneumatic zvigadzirwa, senge mweya sosi yekurapa, pneumatic fittings, masilinda, solenoid mavharuvhu, PU machubhu uye mweya pfuti, angangoita 100 mamodheru uye zviuru zvinhu pasi rese .we yapfuura ISO 9001: 2015 certification, ISO 14001: 2015 kwezvakatipoteredza manejimendi sisitimu certification uye CE mucherechedzo weEU Zvakare isu tiri National High-tech Enterprise, National Standards inosimudzira sangano.
Isu tinogara tichitora "Yakakwira mhando" sechinhu chakakosha kwazvo, zvikamu zvakakosha zvese zvinogadzirwa ne otomatiki kugadzirisa, izvo zvinonyatso kuvimbisa yakagadzikana mhando yezvinhu.
Isu tinotora nguva yakareba mukuyedza-kwehupenyu-hurefu uye tichiomerera kuti chigadzirwa chega chega chinofanira kuongororwa uye kuyedzwa usati wasununguka. Zvichakadaro, "Mushure meSevhisi" ndiko kuzvipira kwedu, nekuti isu tinoziva kuti vatengi vachanyatsonzwisisa maitiro edu ekuzvitarisira uye nekugadzira zvakanyanya uye nekukunda-kukunda mamiriro.
+ R & D manejimendi timu
Pagore kuburitsa kukosha
Nemhando yekutanga-kirasi, yekutanga-kirasi sevhisi, yekutanga-kirasi mukurumbira uye vatengi kuti vashande pamwe kuti vagadzire rakakura purani
Panyaya yekushandisa vanhu, kambani yedu inogara ichiteera musimboti we "vanhu-vanonamira" uye inonamatira kumabasa ebasa e "vanhu vanoita zvavanogona, huwandu hunoshanda". Mukusarudzwa kana kusimudzirwa kwematarenda, isu tinogara tichisimbirira "vanhu vanokwanisa, vanhu vakapfava," Iyo Mediocrity "haifungi nezvehama, shamwari, hukama, hukama, hukama uye mamiriro ari muchiitiko chekushandisa vanhu, asi inotarisa pakukwanisa chaiko kwevashandi. , kutarisisa kuita, kudzidza kwakareruka, kushanda nesimba, uye zera rakareruka, zvichitevera "kurongeka, kururamisira, uye kuvhurika." Nheyo yemakwikwi, kugona.
Panyaya yekudzidziswa kwevashandi, tinoongorora kushanda kwekudzidziswa kuburikidza nemhando dzakasiyana dzekufunda, kudzidzisa kweCD-ROM, uye kupasa bvunzo mushure mekudzidza. Tinokurudzira nekukurudzira vashandi vanokurudzirwa, uye tinotora nyanzvi kuti vataurire vashandi.
Kugadzira Zvishandiso zvigadzirwa Kugadzira Kuchengeta Enterprise
Rakanaka basa Kuchenjerera Sevhisi Dhivha Management Corporate Mweya